FS2004 အကူအညီ3နှစ်ပေါင်း7months ago #18
သငျသညျပြဿနာများ, အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်သင်လျှင် FS2004 Simulator ကိုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းအချို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, ဒီမှာ post ။ ဒါ့အပြင် FS2004 အတွက်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာများနှင့်အမှားများကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
FS2004 အကူအညီ3နှစ်ပေါင်း5months ago #213
မင်္ဂလာပါငါသည်ငါ့အဘို့ B777 များအတွက်အထုပ်ဝယ် FSX Rikooo ကနေငါ setup ကိုများအတွက်အသုံးပြုမှု FMS သို့မဟုတ်မည်သည့်ပြား \_ မထိဖို့မတတျနိုငျဖွစျ၏။ ကူညီပေးပါ။
ကျွန်မအလွန်အသစ်များကိုဖြစ်ကြောင်းကို FSX။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
FS2004 အကူအညီ3နှစ်ပေါင်း5months ago #214
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာမေးရန်နေရာမှား, ဒီ FS2004 နှင့်အတူကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်, မဟုတ် FSX.
အတိအကျသငျသညျကို download လုပ်ပါခဲ့ဘူးထားတဲ့လေယာဉ်ပျံတတိယအချက်အသေးစိတ်ကို။
စတုတ္ထ, ငါတကယ်သင်ဒီမှာကြောင့်လေယာဉ်တင်ဝယ်သည်ဟုမထင်ကြဘူး။ အဖြစ်တာငါသိအဖြစ်, ဒီမှာအရာအားလုံးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။
0.168 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်